​महरा पुत्रको आक्रोश नेम्वाङमाथि, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा महराको चर्चा
Wednesday,2Oct, 2019 10:02 AM
१५ असोज, काठमाडौं । यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसद पदबाट राजीनामा दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । मंगलबार बिहानसम्म एक हिसाबले अघि बढेको घटनाक्रम साँझ आरोप लगाउने महिलाले आफ्नो भनाइ फेरेपछि महराले केही सहज महसुस गरेको बताइएको छ ।
पीडित महिलाका पति काठमाडौं बाहिरबाट राजधानी फर्किएपछि नयाँ वातावरण बनाइएको हो । महरा निकट स्रोतका अनुसार सांसद पदबाट राजीनामा दिनु नपरोस् र महिलाले प्रहरीमा उजुरी नदिउन् भन्ने उद्देश्यबाट नै पछिल्ला गतिविधिहरु केन्द्रित थिए । महिलाले उजुरी हालेको अवस्थामा महरा पक्राउ नै पर्न सक्ने अवस्था समेत थियो ।
त्यसैले साँझ पीडित महिलाको भनाइ फेरिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । महराले राजीनामापछि भने सो प्रकरणका बारेमा मुख खोलेका छैनन् उता महरा पुत्र निर्मल महराले भने सामाजिक सञ्जालमा लगातार विभिन्न स्ट्याटस लेखेका छन् । उनले पूर्वसभामुख नेम्वाङ्गले भनेको ‘महरालाई अब नेकपाले सांसदका रुपमा चिन्दैन’ भनेको समाचारबारेमा टिप्पणी गर्दै भनेका छन,‘महरा पदको भोगी होइनन् । आरोपित घटनाक्रम पुष्टि गर्न नैतिकताका आधारमा राजीनामा लेखेका हुन् । कति छिटो आँ गरेर बसेको ? कमरेडहरु नै आफ्ना कमरेडको अस्तित्व छिटो समाप्त होस् भन्ने कामना गर्न लागेपछि षडयन्त्र केलाई बुझ्ने ? धैर्य गर्नुस् ।’
उनले महरालाई आरोप लगाउने महिलाले सच्याएको भनाइ पनि फेसबुकमा सेयर गरेका छन् । पीडित महिलाले फेसबुकबाट महरालाई गाली गरेका सामग्रीहरु हटाएकी छन् ।
महरापुत्रको अर्को स्ट्याटसमा भनिएको छ,‘समीकरण नयाँ बनाउ, सभामुख नयाँ बनाउ, बाँडीचुँडी खाने प्रधानमन्त्रीको नयाँ भाग लगाउ, षडयन्त्रको शिकार इमान्दारलाई बनाएका छौ, तिम्रो फट्याईँ टिक्ने समय पनि लामो मैले देखेको छैन ।’
कसरी दिनुपर्यो राजीनामा ?
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान महरालाई फोन गरेर घटनाको बारेमा जिज्ञासा राख्दा महराले त्यस्तो केही नभएको बताएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले प्रहरीसँगबाट सूचना लिइसकेका थिए । त्यसकारण ढाँटेको बुझेर उनले महरालाई राजीनामाको निर्देशन दिएपछि महरा दिउँसो राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् ।
यौन दुव्र्यवहारकोे आरोपमा नेपालका सभामुखले राजीनामा दिएको प्रसंगले आजका अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पनि निकै चर्चा पाएको छ ।
न्यूयोर्क टाइम्सले बलात्कारको आरोपमा नेपालका सभामुखले पदबाट राजीनामा दिएको जनाएको छ ।
त्यस्तै अल जजिरा, मियामी हेराल्डलगायतका दर्जनौं मिडियामा समाचार प्रकाशन गरेका छन् । समाचारहरुमा उनी प्रभावशाली कम्युनिस्ट नेता भएको समेत जनाइएको छ । एशोसिएट प्रेस (एपी)ले समाचार बनाएकोले सो समाचार विश्वका विभिन्न मिडियाले सोही एजेन्सीबाट लिएर समाचार बनाएको पाइएको छ ।
न्यूयोर्क टाइम्समा प्रहरी अधिकारी उत्तमराज सुवेदीलाई उद्धृत गर्दै बनाइएको समाचारमा महरा निगरानीमा भएको र घटना भएको अपार्टमेन्टबाट केही सामान लिइएको समेत जनाएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीलाई उद्धृत गर्दै सोही समाचारमा घटनापछि महराले राजीनामा गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा टिप्पणी गरिएको छ ।